raha hiresaka mikasika ny orinasa hahazo ny fifanarahana vaovao indray momba ny fanamian’ny ekipam-pirenena dia ny Barea izany. Nitarika hatrany amin’ny fametraham-pialan’ny mpikambana iray eo anivon’ny komity mpandinika izany mihitsy ny tsy fifanarahan-tsaina misy eo anivon’ity rafitra iray ao anaty FMF ity. Tsy iza moa izay nametra-pialana izay fa ny mpikambana, Justin Andriantsoray, izay nilaza fa orinasa tsy ampy traikefa no kasaina hanankinana indray ny fanamboarana ny fanamiana. Ny orinasa TED Holding, raha ny heno, hatreto no kasain’ity komity ity hanaovana ny fifanarahana. Orinasa izay nanomboka ny oktobra 2019 no namokatra izy io, raha ny fantatra, ary orinasa malagasy.